के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ ? के हुन्छ फेर्दा ? – List Khabar
Home / रोचक / के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ ? के हुन्छ फेर्दा ?
के तपाईं नुहाउदा पिसाब फेर्नुहुन्छ ? के हुन्छ फेर्दा ?
admin December 31, 2021 रोचक Leaveacomment 163 Views
मानिसको आ-आफ्नै आनीबानी बारे कुरा गर्ने हो भने सबै मानिसको कुन व्यवहार स्विकार्य र कुन कुरा अस्विकार्य भन्ने आ–आफ्नै धारणा हुन्छ तर एक अज्ञात व्यक्तिले बाथरुममा गरेकाे बानी बारे एउटा सामान्य प्रश्न मात्र उठाइदिँदा पनि ठूलो र गरमागरम विवादh तानिएकाे छ ।
एक्लै नछाड्नुहोस यो बेला आफ्नो पार्टनरलाई,अरूबेला भन्दा धेरै चहान्छन यो बेला एउटा सामान्य मानिसका लागि महिलाहरु कुन समयमा बढी का’मु’क र से’क्सी देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा सामान्य नैं हो । आज हामी यस कुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी सेक्सी हुनेगरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ ।
बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन ।त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न तरीका अपनाउँछन् ।
Previous कहीँ तपाइँको कानको बाहिरी भागमा प्वाल त छैन ? के कारणले यस्तो हुन्छ ?
Next ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिअन्टले डरलाग्दो सुनामी ल्याउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावोनी